Taom-pambolena 2020: hamokatra vary 500.000 t fanampiny | NewsMada
Taom-pambolena 2020: hamokatra vary 500.000 t fanampiny
Nisantatra ny taom-pambolena 2019-2020 ny filoha Rajoelina tany amin’ny kaominina Ifanja Sarobaratra, faritra Itasy, ny sabotsy 16 novambra teo. Tanjona ny hahavitan-tena ara-tsakafo, indrindra ny vary, hampitomboina ny velaran-tany hambolena.
Fahavitan-tena ara-bary ! Io no anisan’ny laharam-pahamehan’ny fanjakana amin’ny lafiny fahavitan-tena ara-tsakafo eto amintsika. Maro ny paikady hanatanterahana izany, amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep). Tato anatin’ny sivy volana tamin’ity taona 2019 ity, nahatratra 35.568 ha ny velaran-tany narenina. Any Melaky sy Alaotra, nahatratra 2.610 ha ny velaran-tany vaovao nohajariana ary ho tonga hatrany amin’ny 7.810 ha, amin’ny faran’ity taona ity.
Amin’ny taona 2020, manodidina ny 150.000 ha ny velaran-tany hohajariana eto Madagasikara. Kendrena ny hahazoana vary akotry 500.000 t fanampiny, manome vary fotsy 325.000 t, amin’ny fotoam-pararano jona 2020. Maro ny fandaharanasa sy ny tetikasan’ny Maep sy ny mpiara-miombon’antoka aminy samihafa hanatrarana ireo. Fanajariana lemaka vaovao sy fanavaozana ny efa misy, fanapariahana ny teknikam-pambolena (SRI) sy ny masomboly ary zezika, ny fifaninanana mamboly vary, famatsiana fitaovam-pamokarana, fampiroboroboana ny fandraharahana amin’ny fambolena, sns. Tanjona ny hahavitan-tena amin’ny vary, amin’ny taona 2020, ary hahavita tena ara-tsakafo amin’ny taona 2024.
Homena tany 10 ha sy trakitera
Nambaran’ny filoha Rajoelina Andry tany Ifanja Sarobaratra, fa tohizana ny fifaninanana mamboly vary manerana ny faritra 22, ka homen’ny fanjakana velaran-tany 10 ha tsirairay avy ny voalohany, miampy trakitera.
Amin’ny taona 2020, tanjona ny hahavitana 10.000 ha any amin’ny faritra Sava (Fanambana), 40.000 ha any Sofia (Bekapila sy Bealalana), 3.000 ha any Boeny (Katsepy), 4.000 ha any Alaotra, 35.000 ha any Atsimo Andrefana, 35.000 ha any Mangoky, 11.800 ha any Dabara sy Manja ary 8.000 ha any Anosy (Ambovombe).